Yan Aung: ၀ိရောဓိ ပညတ်ချက်များ...
လူတွေမှာ ယုတ္တိမတန်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေ၊
လူတွေကို ချစ်မြဲချစ်ပါ၊ လေးစားမြဲလေးစားပါ…
ကိုယ့်ဖက်ကိုပဲ ကြည့်တတ်တယ်၊ အတ္တသိပ်ကြီးတယ်လို့ပေါ့
မင်းမှာ မိတ်ဆွေတုတွေနဲ့ ရန်သူစစ်တွေကို ရရှိလာလိမ့်မယ်
မင်း ဒီနေ့လုပ်လိုက်တဲ့ ကောင်းတဲ့လုပ်ရပ်တစ်ခုကို
မနက်ဖြန်မှာ သူတို့ မေ့ပစ်လိုက်လိမ့်မယ်
မင်းရဲ့ ရိုးသားမှုနဲ့ ပွင့်လင်းမှုတို့က
မင်းကို ပျော့ကွက်တွေအဖြစ် ထိုးနှက်သွားနိုင်တယ်.
စိတ်သဘောထားသေးသိမ်တဲ့ လူတွေက အသရေဖျက် ပြောဆိုပြစ်တင်နိုင်တယ်
ဘယ်သူနဲ့မှ မတူအောင် စဉ်းစားတွေးခေါ်ပါ.
နှစ်လကြာရှည် ကြိုးစားတည်ဆောက်ခဲ့ရတဲ့ မင်းအိပ်မက်တွေ
ညတွင်းချင်း ဖြိုလှဲ ဖျက်ဆီးခံရလိုက်နိုင်တယ်.
လူတွေ မင်းရဲ့ အကူအညီလိုအပ်တယ်
ဒါပေမယ့် ကူညီတတ်တဲ့ မင်း ကို ပြန်လည်တိုက်ခိုက်နိုင်တယ်.
ကမ္ဘာကြီးအတွက် မင်းမှာ ရှိသမျှ အကောင်းဆုံးတွေ ဖြန့်ဝေပေးဆပ်ပါ.
မင်းကို ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခံရတာမျိုး ကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်.
ဆက်လက် လုပ်ဆောင်မြဲ လုပ်ဆောင်သွားပါ…
ဒီကဗျာလေးကို Kent M. Keith က ရေးခဲ့တာပါ. ဟားဗတ် တက္ကသိုလ်မှာ တက်နေရင်း အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ်မှာ စတင်ရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်. မူရင်းကဗျာကို ဒီနေရာမှာ ဖတ်ပါ.
ဒီကဗျာလေးကို ကျွန်တော်စတွေ့ခဲ့တာကတော့ မနေနေနိုင်ရဲ့ ဘလော့ဂ်လေးကပါ. ခွန်အားတွေ ပြန်လည်မြှင့်တင်ပေးစေနိုင်တဲ့ ကဗျာကောင်းလေးတစ်ပုဒ်မို့ မာသာထရီဆာဟာ ကာလကတ္တားမှာ ရှိတဲ့ မိဖမဲ့ ဂေဟာလေးတစ်ခုမှာ ဒီကဗျာလေးကို ချိတ်ဆွဲထားခဲ့ပါတယ်.
After reading this poem, I realized what i have been miss from peoples and more understand how to conduct with who i deal with as well as in my environments.
I very much like this poem as all the words are very simple and magnificently meaningful.
It touched to my soul and give me strengths indeed. Will keep this poem in my Diary for sure.
Your translation in Burmese to this poem is superb!!
Thanks for sharing and to translated in Burmese.
နောက်လည်း ကိုယ်ပိုင်ကဗျာတွေရေးသလို၊ အချိန်ရရင် တခြား ကဗျာကောင်းလေးတွေကိုလည်း ခုလို ခံစားဘာသာပြန်ပေးဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ :)
GIVE your best. But then again, we must really try hard as most people in this material world usually are so used to with “give and take” in many situations. Sure thing, you can beatruly happy person if you live with these commandments. And I believe everyone wants to be happy. So there you go....
ဟားဗတ်ကျောင်းသားတစ်ယောက်ေ၇းခဲ့တာတဲ့လားဗျာ.. တကယ်ကို သရုပ်လည်းပေါ်၊ စိတ်အားလည်း တက်ကြွစေပါတယ်... မျှဝေပေးတာကျေးဇူးပါ..
ဖတ်ပြီး အားပြည့်သွား ပြီ..။ ကျေးဇူး..။